‘Te-hanao Antso Avo Amin’ilay Dokotera Ao Anatin’i Assad Aho’: Hafatry Ny Siriana Iray Mpitsabo Taorian’ny Nitsidihany An’i Alep · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2016 6:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Magyar, Ελληνικά, Français, English
Dokotera Zaher Sahloul (eo ankavanana) miaraka amina mpiara-miasa roa avy any Alep, ny faran'ny jona 2016. Sary nampiasaina nahazoana alalana..
Tamin'ny taona 1988, no nahazo ny maripahaizana tao amin'ny sampam-pianarana ho mpitsabo ny Dokotera Zaher Sahloul, mpanorina ny fanampiana Amerikana ho an'i Siria sady Filoha fahiny sy mpanolotsaina ny Fikambanana Amerikana Siriana momba ny fitsaboana (SAMS). Anisan'ireo iray kilasy taminy ny lehilahy iray izay hitondra akony bebe kokoa mihoatra noho ny hafa amin'ny hoavin'i Siria any aoriana, Bashar Al Assad. Ao anatin'ity tafatafa tamin'ny Global Voices, taorian'ny diany farany teo tany Alep Atsinanana izay ataon'ny mpihoko fahirano ankehitriny ary ambany fitantanan'izy ireo, nanao antso avo tamin'ilay “dokotera ao anatin'i Assad” i Dokotera Sahloul.
Vao haingana ny Dr. Sahloul no nanao famelabelarana tao amin'ny Firenena Mikambana, izay nampitahàny ny fitsidihany an'i Alep tamin'ny tantaran ‘ny lietnà jeneraly iray ao amin'ny Tafika Mena sovietika izay nanatri-maso ny fanaovana fahirano an'i Stalingrad (1942-1943), tamin'ny famaritana izany ho “ratsy avo folo heny noho ny helo“.
Toy ny diany taloha tao amin'ilay tanàna, dia tonga tamim-pahavononana i Dokotera Sahloul. Talohan'ny nanafaingana ny dia, nilaza taminy ny mpamily mba “hanao ny vavaka farany satria ambony tokoa ny tahan'ny mety hahafatesana ao anatin'ny 5 kilaometatra manaraka”. Ny Lalambe Castello no lazaina amin'io dimy kilaometatra io, ‘hany làlana tokana mitondra mankany amin'ny ambanivohitra avaratra sy andrefan'i Alep’, manolotra làlana tokana mankany amin'ny tontolo ivelany amin'ny alalan'i Torkia, ary araka izany ny famatsiana sakafo, fanafody ary zavatra hafa ilaina ampiasaina any Alep.
Ity rakitsary manaraka ity dia noraketin'i Dr Sahloul:
Mampahatsiahy i Dr Sahloul:
Ity farany ity no iraka fahadimy nataoko taty Alep ary niharatsy noho ny teo aloha ny toe-draharaha. Raha nandeha taty izahay tamin'ny 27 Jona dia mbola voabahana tamin'ny antsasany ny làlana. Tamin'izany dia efa tena nampidi-doza. Nisy 5 kilaometatra tamin'izany nampihanjahanja anay mety ho voan'ny daroka baomba avy amin'ny ankolafin'ny mpitondra, mpitily avy amin'ny Kiorda sy koa fanafihana an'habakabaka izay mety ho avy amin'ny mpitondra na ny governemanta Rosiana. .
Ilay làlana mahitsy antsoin'ny mpikatroka iray mafana fo hoe ‘Làlan'ny Fahafatesana‘ dia voaodidina fiara may sy kamiao miongana ary fiarabe izay misy vatan'olona navela ho lo eo.
Ny làlana mankany Alep, sary nalain'i Dr Zaher Sahloul tamin'ny 27 Jona 2016 ary nahazoana alalana ny ampiasana azy eto.
Rehefa tonga tany Alep dia namonjy ny M10 i Dr Sahloul sy ireo mpiara-miasa aminy, hopitaly iray ambanin'ny tany izay im-17 nodarohan'ny fitondran'i Assad baomba tao anatin'ny efatra taona lasa. Iray amin'ireo hopitaly vitsy mbola mitsangana any Atsinanan'i Alep io..
Matetika voafaritra ho anisan'ny ratsy indrindra, mba tsy tena ny ratsy indrindra erantany mihitsya aza, ny fepetra iasan'ny dokotera Siriana. Tombanana ho 35 sisa ny dokotera any atsinanan'i Alep izay misy mponina eo ho eo amin'ny 300 000, midika izany fa amin'izao fotoana izao dia dokotera iray hoan'ny olona 8.570. Vao haingana ny 15 amin'ireo dokotera 35 no nandefa taratasy misokatra hoan'ny Filoha Obama, mitaraina izy ireo anatin'izany fa ‘isaky ny 17 ora ny trano fitsaboana no tafihan'ny tafika an'habakabaka Siriana tohanan'ny Rosiana’. Mandritra izany fotoana izany, mitatitra ny Mpitsabo Tsy Voafetran-tSisintany fa farafahakeliny 82 amin'ireo trano fitsaboana tohanan'izy ireo no lasibatra hatramin'ny janoary 2015. Raha atambatra, farafahakeliny 738 ireo dokotera Siriana, mpitsabo mpanampy no maty tamin'ny fanafihana maherin'ny 360 nanjo toeram-pitsaboana hatramin'ny Martsa 2011, araka ny filazan'ireo Mpitsabo Mpiaro Zon'olombelona (PHR).
Milaza i Dr Sahloul fa re na andro na alina ny fipoahana:
Mihozongozona ny rindrin'ny hopitaly, fa manohy miasa ny olona satria efa zatra ireny feo ireny ry zareo. Ny maha-any ambanin'ny tany [ny M10] no mba manome fiarovana sy filaminana ambonimbony ny marary sy ny mpitsabo. Ity no hopitaly lehibe indrindra mitsabo ny ratra ao Alep Atsinanana.
Afaka henoinao ao anatin'ity lahatsary fohy noraketin'ny Dr Sahloul ity ireo fipoahana. Araka ny filazan'ny lehilahy iray izay re ao anatin'ilay fandraketana, vokatry ny balafomanga Scud izany. Hoy izy: :
Rehefa midaroka baomba ireny hopitaly ireny governemanta Rosiana na ny fitondrana Siriana dia ny hanimba ilay hopitaly no antony anaovan'izy ireo izany. Tian'izy ireo hosarihana hivoaka ny dokotera amin'izay manaraka azy ireo ny olona. Satria rehefa tsy misy dokotera eo an-tanàna, rehefa tsy misy hopitaly eo an-tanàna dia tsy mijanona eo ny olona.
Araka ny Dr Sahloul, amin'ny olona 300.000 monina any Alep, ankizy ny 85.000 ahitàna zaza latsaky 2 taona eo amin'ny 20.000. Iray amin'ireny ankizy ireny i Ahmad Hijazi, vao dimy taona monja. Voan'ny baomban-tsolik”i Assad izy ary vokatr'izany dia nisy ratra ny tratrany ary potika bala tafajanona tao anatin'ny tsokan-damosiny. Indrisy fa tsy tana ny ain'i Hijazi.
Nalemy nanomboka tao amin'ny hatony izy. Tamin'ny nahitako azy, manana olana be izy rehefa miaina ka tsy maintsy nasianay fantsona tao am-bavany ary nametrahana milina hanampiana hitazonana ny ainy. Niady tamin'ny fahafatesana izy fony aho tany ary taorian'ny andro nialako tany, nijanona ny fony. Dimy taona izy..
Ireo olona voadaroky ny baomban-tsolika no anisan'ny marary betsaka fahita indrindra ao amin'ny M10 hopitaly ambanin'ny tany. Olona iray hafa niharan-doza, Fatima, 25 taona, izay efa renim-pianakaviana nanana zanaka telo ary bevohoka telo volana ny zanany faha-efatra no nilatsahan'ny baomban-tsolika teo ambonin'ny tranony. Roa tamin'ireo zanany no maty. Abdo, sivy taona sy Ilaf, telo taona, dia maty nosintonina avy ao ambanin'ny korotan-trano rava. Soa ihany fa i Fatima, izay nandeha rà anaty ary nasiana fitazonan'aina avy hatrany, sy ny zanany telo taona Mahmoud dia nipitika, saingy nafoin'i Fatima ilay zanany tao am-bohoka.
Mahmoud, fito taona, ao amin'ny efitranon'ny hopitaly M10. Sary nalain'i Dr Sahloul tamin'ny Jona 2016, ary ampisaina eto, nahazoana alalana.
Vao haingana no niteny tamin'i Hala Gorani avy amin'ny CNN i Dr Sahloul fa mikasa ny hanao antso avo amin'ilay “dokotera ao anatin'i [Assad]” mba hampitsahatra ny baomban-tsolika. Manazava toy izao izy::
Iza no mahalala? Efa nanao izay azonay natao izahay. Amiko, ny fiarahamonina iraisam-pirenena efa nanao izay azony natao amin'ny lafiny fampiharana ny fanerena amin'ny fitondrana Siriana. Tsy fantatro raha fantany, nefa mety mahalala izy fa maty sy mahazo kilema ny ankizy ary lasibatra ny hopitaly. Ny tiako ho lazaina, dia manan-janaka, manam-bady izy. Nianatra ho mpitsabo izy. Noheverina ho tokony ho lasa mpitsabo maso. Tamin'ny iray amin'ireo fivoriana niarahanay taminy, ny fivoriana voalohany taorian'ny nahalasa azy ho filoham-pirenena, nolazainy taminay fa raha afaka nisafidy izy dia naleony ho dokotera fa tsy filoha. Heveriko fa mila miantso izay lafiny iray ao aminy izay isika. Tsy fantatro na hety na tsia. Maro ireo Siriana niraviravy tànana tanteraka, indrindra rehefa nanara-maso ny famotehana ny antsasaky ny firenena izy. Maherin'ny 470.000 no maty tao Siria. Izay no nahatonga io ady io. Afaka nanao zavatra izy tany am-piandohan'ny krizy, toy ny famaliana ny fitakian'ny olona hisian'ny fanavaozana tpy izay efa natao tany amin'ny firenena hafa toa an'i Maraoka sy Jordania. Angamba efa tara loatra, nefa inona ankoatra izay no azontsika atao?
Lazainy koa fa hitany ny herin'i Assad eny amperin'asa:
Rehefa niverina avy tany Chicago aho taorian'ny fivoriana voalohany niarahana taminy amin'ny maha-filoha azy, fantatry ny olona fa nihaona taminy aho. Araka izany, ny taona manaraka, nahazo imailaka aho avy tamin'olona izay nanontany raha azoko atao ny manome taratasy ny filoha; ka nolazaiko fa eny, afaka manome aho, saingy tsy maintsy vakiako aloha ilay taratasy. Antso avy amin'olona izay dokotera ny rainy, dokotera mpitsabo manokana ny zaza, nandranto fianarana tany Etazonia ary avy eo nandeha tany Siria tamin'ny faramparan'ny taona 80, ary nogadrain'ny rain'i Bashar Al Assad, Hafez An assad. Nigadra nandritra ny 21 taona izy, vaompanga ho manohana ny mpanohitra. Ary hoy aho taminy hoe, hanandrana aho, saingy tsy afaka ny hampanantena na inona na inona..
Soa ihany fa nahazo fanasàna indray izahay mba hihaona amin'ny filoha ao amin'ny lapam-panjakana. […] Rehefa handeha aho dia nolaza taminy momba ilay taratasy ary nekeny ny hamaky azy. Ary antsak'adiny taty aoriana rehefa lasa izahay dia nisy olona niantso aho ary hoy izy: ‘Afaka ny namanao’. Noho izany navotsony io dokotera io 21 taona taty aoriana, rehefa avy namaky ilay taratasy izy..
Izany dia entina ilazana fa izy no mifehy ary afaka maka fanapahan-kevitra haingana, ary manaraka azy ireny ny olona. Io dokotera io dia nahazo nandeha tokoa tany Etazonia mba hijery ny vadiny izay voan'ny homamiadana tonga amin'ny dingana farany. Niara-nipetraka taminy [nandritra ny] roa taona izy talohan'ny nahafatesan'ny vadiny. Ary amin'izao fotoana izao dia mitsabo any Chicago izy.
Manao izany indraindray hoan'ny olona ny mpitondra, indrindra raha olona tiany ho tonga mpiara-miasa. Omeny tombon-dahiny ianao ary antenainy hifikitra aminy avy eo. Izany no rafitra any Siria sy any amin'ireo firenena hafa mpanao jadona. Manome tombon-dahiny anao ny filoha, ary inoako fa heverin'ny filoha Assad ho tombon-dahiny ho ahy io. Manome anao topimaso momba ny fandehan'ny raharaha any Siria izany..
Raha ny mahakasika ny demokrasia any Siria, hoy ny Dr Sahloul momba an'i Assad :
Rehefa nanontany azy momba ny resaka demokrasia aho, nolazainy tamiko fa ny Siriana dia foko, misy fitsinjaràna ho sekta maromaro, tsy nampianarina momba ny maha-olom-banona izy ireo, tsy afaka maka fanapahankevitra ho an'ny tenany. Nitaraina momba ny parlemanta izay tsy namoaka lalàna araka izay nantenany hataon'izy ireo, sy ny tsy maintsy nandraisany an-tànana ny fanaovana ny zavatra rehetra. Ary avy eo dia hoy izy – Tsy tadidiko ny teny tena izy – hoe ny Siriana dia tsy mbola vonona ho amin'ny demokrasia. Tsy maintsy ho dingana tena mandeha miadana sy mandeha amin'ny ambaratongany izany ary izay no taona voalohany taorian'ny nahalasa filoha azy. Roa ambin'ny folo taona taorian'izay, tsy nisy na inona na inona nitranga?..
Raha ny mahakasika ny Filoha Obama, nihaona taminy ny Dr Sahloul tamin'ny jolay 2013, iray volana talohan'ilay fandripahana tao Ghouta izay nampalaza ratsy ny fitondrana, ary nilaza fa i Syria no hamaritra ny lova navelany amin'ny maha filoha azy. Ity ilay fifampiresahana: :
Nanome taratasy tamin'ny anaran'ny SAMS aho. Nisy Iftar (sakafo hariva mandritry ny fotoana fifadian-kanin'ny Miozolmana) tao amin'ny Trano Fotsy tamin'izay andro izany satria Ramadany. Niteny taminy aho fa ao anatin'ny taratasinay dia nangataka faritra habakabaka tsy azo isidinana izahay mba hiarovana ny hopitaly sy ny olon-tsotra, izay zavatra mbola angatahanay hatramin'izao fotoana izao. Tsy nisy na inona na inona niova. Nilaza taminy aho: “Mino aho fa ny lova apetrakao dia miankina amin'izay ataonao na tsy ataonao any Siria”. Ary nihaino bebe kokoa izy. Ary dia nihomehy izy no sady niteny fa zavatra hafa no hamaritra ny lova avelany, izay novaliako hoe ‘Nefa heveriko fa i Siria no antony lehibe indrindra’. Ary namaly izy, ‘Mbola hiverina hiresaka aminao aho’. Nefa tsy niverina niantso ahy mihitsy izy. Tsy novaliany mihitsy ilay taratasy..